Rag hubaysan oo 2 qof ku dilay Gaarisa - Sabahionline.com
Rag hubaysan oo 2 qof ku dilay Gaarisa
Rag hubaysan oo aan la garanayn ayaa habeennimadii Axadda (3-dii Maarso) Gaarisa ku dilay mas'uul ka tirsan Wasaaradda Howlaga Guud iyo kalkaaliso caafimaad oo ka timid xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Rag hubaysan oo saddex askari ku dilay Gaarisa
Rag hubaysan oo 3 ku dilay Mandera iyo Gaarisa
Rag hubaysan oo qof rayid ah ku dilay Gaarisa
Guddoomiyaha Gobolka Gaarisa Maalim Maxamed ayaa u sheegay Sabahi in labada qof la dilay markii ay ka soo baxeen dukaan caam ah oo ku yaal Waddada Ngamia abbaaraha 9-kii fiidnimo. Kalkaalisada ayaa isla goobta ku naf baxday halka mas'uulku uu ku dhintay Isbitaalka.
Waxa uu sheegay in toogashada looga gollahaa in dadka looga cabdsi-galiyo in ay codeeyaan doorashada Isniinta. "Waxaannu adkeeynay ammaanka gudaha iyo hareeraha goobaha cod-bixinta dadkuna waa in uunan shilkan cabsi galin," ayuu yiri.
Kuwa weerarka soo qaaday ayaa soo daba galay dhibanayaasha ka hor inta ayan ka toogan masaafo aad ugu dhow, sida uu qoray The Standard-ka Kenya. Bilayska ayaa baadi-goobaya tuhmanayaasha mana jiraan wax la qabtay.